U-70% wabaqwayizi awuzivikeli kwi-HIV - Ucwaningo | News24
U-70% wabaqwayizi awuzivikeli kwi-HIV - Ucwaningo
Johannesburg - Yize behlinzekwa ngephilisi elilodwa njalo ngosuku ukubavikela ekutheni batheleleke nge-HIV, cishe amakota amathathu abesifazane abangabaqwayizi bayayeka ukuthatha leli philisi ngemuva konyaka beqalile.
Lokhu kungokombiko oshicilelwe kwi-PLoS ngesonto eledlule, mayelana nocwaningo olwenziwe ngabe-TAPS Demonstration Study.
Lolu cwaningo oluhlole cishe abesifazane abangu-700, luveza ukuthi ebantwini abaningi okukhulunywe nabo kukhona "abashadile noma abanomaqondana, abasebenza njengamayengandoda futhi bazalelwa eZimbabwe".
Cishe ingxenye yabesifazane abahloliwe kutholakale ukuthi bane-HIV. Kulaba abangu-341, u-139 kubona wanquma ukuthatha ama-ARV ngesikhathi bethola ukuthi banaleli gciwane. Babalelwa ku-60% abasaqhubeka nokuthatha le mishanguzo ngemuva konyaka beyiqalile.
OLUNYE UDABA: Kuvele imiphumela emangalisayo kwenziwa ucwaningo lwama-ARVs kone-HIV
Abaqwayizi okutholakale ukuthi abanayo i-HIV, (abangu-351) bahlinzekwa ngephilisi iTruvada, ukuba balithathe zonke izinsuku ukuze bezovikeleka kuleli gciwane. Bangu-219 kubona abavuma ukuthi bazolithatha leli philisi.
Kepha ngemuva konyaka, bangu-49 kuphela abesifazane abadla iTruvada – kanti bonke labo abasayiphuza akekho kubona osasuleleke nge-HIV.
“Isibalo sabantu abaqhubekayo nale mishanguso sincane kakhulu, kepha akukho ukutheleleka okukhona kulabo abaqhubekayo nokuthatha i-PrEP,” kusho uRobyn Eakle, ongumcwaningi omkhulu eWits Reproductive Health and HIV Institute (WRHI), nayo eyingxenye yalolu cwaningo.
Ukusebenzisa ama-ARV ukuvikela abantu ekutheni basuleleke nge-HIV kubizwa nge-Pre-exposure prophylaxis (PrEP).
Ucwaningo lwakamuva lutshengisa ukuthi iTruvada iwusizo kakhulu ekuvikeleni abantu ekutheni bangasuleleki ngesandulela ngculazi.